मन्त्री थापालाई बर्खास्त नगरेसम्म संसद चल्न नदिने एमालेको अडान कायमै, सरकार र प्रतिपक्षबीचको वार्ता असफल ! – Nepal Press
२०७८ जेठ २४ गते १८:३६
सो मुद्दाको सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०५७ असोज २ गते फैसला हुँदा भेषबहादुर थापालाई १ वर्ष कैद र रु. ५० जरिवाना भएको र अम्मरबहादुर थापालाई ६ महिना कैद र २५ रुपैँया जरिवाना भई भएको फैसला अन्तिम भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट फौजदारी अभियोग प्रमाणित भइसकेपछि मन्त्री थापाले आफनो नामसमेत बदलेको पाइएको छ । अदालतबाट सजाय प्रमाणित हुँदासम्म उनको नाम अम्बरबहादुर थापा थियो । सो सजाय यता उनले अम्मरबहादुर थापा लेखाउँदै आएको पाइएको छ । नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको व्यक्ति कुनै पनि सार्वजनिक पदको कार्यभार लिन अयोग्य हुन्छ ।
प्रकाशित: २०७८ जेठ २४ गते १८:३६
One thought on “मन्त्री थापालाई बर्खास्त नगरेसम्म संसद चल्न नदिने एमालेको अडान कायमै, सरकार र प्रतिपक्षबीचको वार्ता असफल !”
रेशम चौधरी को मुद्दा फिर्ता लिने अनि दिपक मनाङी जस्तो लाई मन्त्री बनाउनेहरुको केको रोईलो हो